Godobtii Boqolka Sanadood - Boga Wise Man
December 15, 2019 qawdhan
Illaahay, Subxaanahu Wa Tacaalaa, ayaa adduunka xukuma!
Allena adoomihiisa if iyo aakhiroba wuu ugu garqaadaa uguna xaqsooraa. Nabi Muuse calayhi salam ayaa mar Illaahay weydiiyey masaladan. Allena wuxuu u tilmaamay inuu meel ceel ahayd tago oo fadhiisto kadibna eego waxa ka dhaca.
Ceelkii waxa soo maray nin faras wata oo haraadan, wuu ka cabay ceelkii, faraskiina wuu ka waraabiyey kadibna wuu ka tegay. Balse waxa uu ku illoobay kiish dahab ah. Isla ceelkii waxa soo maray nin aad u daalan, haraadan oo diif badanina ka muuqato. Ceelkii ayuu ka cabay oo ku ag nastay kadinba waxa uu arkay kiishkan meesha yaala ee dahabka ah. Inta uu hareeraha iska eegay ayuu kiishkii dahabka ahaa qaatay. Ceelkii waxa yimid nin adhi badan wata, isagoo adhigiisii ka waraabinaya ceelkii ayuu soo noqday ninkii faraska watay ee dahabka ku illaabay ceelku. Ninkii adhiga watay ayuu ku eedeeyey inuu dahabkiisii qaatay, halka ninkii adhiga watay u sheegay inaanu waxba ka ogeyn. Muran kulul kabacdi ninkii faraska watay waxa uu kurka ka gooyey ninkii adhiga watay.
Arrinka meesha ka dhacay waxa uu ka yaabiyey Nabi Muuse calayhi salam. Alle ayaa u sharxay kadib arrinkii. Ninkii faraska watay awoowgii ayaa dahabka ka dhacay ninkii lugeynayay awoowgii wakhti hore, kadib dahabkii wuxuu Alle u celiyey ninkii dhaxal ahaan lahaa. Dhanka kale ninka faraska watay awoowgii ayaa waxa dilay ninkii adhiga waraabinayay.
Qisadan waxaan usoo qaatay waxa imika laga joogaa boqol sano sanadkii 1919-kii oo ahaa sanadkii Boqortooyada Ingiriisku cagta marisay Boqortooyadii Islaamka ee Cusmaaniyiinta. Waa sanadkii ciidamada Cusmaaniyiinta lagaga adkaaday dhulka Falastiin, Ingiriiskuna qabsaday Falastiin. Inkastoo boqortooyada Islaamka ee Cusmaaniyiintu soo jilcaysay, 1922-kiina lagu dhawaaqay in ay dhamaatay hadana 1919-kii ayaa ahaa wakhtigii dhamaanba lagala wareegay dhulkii muhiimka ahaa ee ay maamuli jirtay gaar ahaan Ciraaq iyo Falastiin.
Maanta Ingiriiska waxa qabsaday nin la yidhaa Boris Johnson oo asal ahaan ah nin Turki ah oo awowgii labaad, Cali Kamaal, ka yimid Turkiga. Cali Kamaal waxa uu dhintay sanadii 1922-kii. Cali Kamaal wiilkiisii iyo inantiisii ayaa qaatay magaca Johnson. Wiilkii Cali Kemal oo la o dhan jiray, Cismaan Kamaal, kuna dhashay dalka Ingiriiska ayaa magaciisa u bedeshay Wilfred Johnson.
Wilfred Johnson waxa uu dhalay Stanley Johnson oo hada nool ahna Boris Johnson aabihiis.
Hadaba Raysal Wasaaraha cusub ee Ingiriisku, Boris Johnson, inkastoo aanu isagu isu haysan in uu waxyeelaynayo wadanka uu madaxda ka noqday ee Ingiriiska balse isleeyahayba wadanka hagaaji, hadana sidaan anigu qabo meesha waxa dhici karta in Alle wax kale kawado. Dad badan oo siyaasada indhodheeya ayaa waxay ka digayaan in mudan Johnson noqdo Raysal Wasaarihii ugu dambeeyey ee Ingiriiska. Doorashadan uu Johnson ku noqday Raysal Wasaarahay ayaa waxay keeni kartaa in boqortooyada Ingiriiska oo ah afar dal oo midoobay ay laba kamid ahi ka go’aan. Boqortooyadu waxay ka koobantahay afar dal oo kala ah:
1. England (55 milyan oo qof)
2. Scotland (5 milyan oo qof)
3. Wales (3 milyan oo qof)
4. Northern Ireland (2 milyan ku dhawaad qof)
Ka bixista Boqortooyadu rabto inay ka baxdo Midawga Yurub ayaa waxa kasoo horjeeda wadamada Scotland oo iyadu rabta in dadkeeda laga qaado afti ay kaga baxdo Boqortooyada Ingiriiska iyo Northern Ireland oo iyadu rabta inay la midawdo wadanka ay walaalaha yihiin ee Ireland.
Waxa dhici karta in siyaasada Johnson ay keento in uu dalka Ingiriisku kala go’o, lumiyana booska saree e ay ka qaataan hogaaminta dunida taas oo ay gadhwadeen ka ahaayeen siyaasada midawga Yurub. Dhanka kale Midawga Yurub waa suuqa ganacsi ee Ingiriisku alaabta ugu badan u dhoofiyo, alaabta ugu badana kala soo dego. Is bedel iyo cashuuro ku yimaada xidhiidhkaasina waxay noqonaysaa mid waxyeelaysa dhaqaalaha Ingiriiska.
Ugu dambeyn waa meel Alle wax ka wado, Ingiriiskana waxa laga yaabaa cuqubadii uu ka galay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta in uu Alle nin Turki ah gacanta u geliyey kuna sababo burburka Boqortooyada saamaynta badnayd ee badi dalalka adduunka gumeysatay!
Previous Post Siyaasada iyo Maareynta Nolosha
Next Post Qorshe La’aan Iyo Qabiil